‘एसईई रोकिएका विद्यार्थीलाई सिधै कक्षा ११ मा भर्ना गरौं’ | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
काठमाडौं। ‘बहस गरौं, कक्षा १० उत्तीर्ण भइसकेका विद्यार्थी भाइबहिनीलाई फेरि सोही तहको एसईई परीक्षा दिनैपर्ने बाध्यता किन ? कोरोनाको कारण स्थगित गरिएको एसईई परीक्षाको पूर्ण तयारीमा रहेका विद्यार्थीले अब सिधै ११ कक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था गरे हुन्छ।
विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव कम गर्न, अभिभावकलाई आर्थिक भार कम गर्न र राज्यलाई साधारण खर्च घटाउन माध्यमिक तहमै दोहोरो मापदण्डको एसईई परीक्षा खारेजीका लागि सर्वपक्षीय पहल गरौं। ८ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक तह मानिसकेपछि एसईई जरूरी छैन, बरू १२ कक्षापछि यस्तो परीक्षा गराए हुन्छ। किनकी अहिले सबैतिर एसईईको सर्टिफिकेटभन्दा १२ को सर्टिफिकेट र मार्कसिट अनिवार्य छ।’
बिहीबार साँझ पत्रकार सन्तोष पौडेलले लेखेको फेसबुक स्टाटस हो यो। पौडेल मात्र होइन, कोरोना भाइरसका कारण अन्तिम समयमा आएर एसईई परीक्षा स्थपित भएपछि विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य के हुन्छ ? भन्ने विषयमा बहस प्रारम्भ भएको छ। बुधबार साँझ सरकारले एसईई परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय लिएसँगै परीक्षा रोक्नु ठीक कि बेठीक भन्नेसम्मको तर्कले स्थान पायो।
कतिले अन्तिम समयमा आएर एसईई परीक्षा स्थगित गर्नु राज्यको लापर्वाही भएकोसम्म भन्न भ्याए। कतिले परीक्षाभन्दा जीवन ठूलो भएको भन्दै सरकारको खुलेर प्रशंसा गरे, त कतिले सरकारले विद्यार्थीले बजारमा डेरा नखोज्दै एक साता पहिले निर्णय लिनुपर्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरे। क्रिया–प्रतिक्रिया जे आए पनि परीक्षा स्थगित भइसकेको छ। र, डेरा खोजिसकेका दूरदराजका विद्यार्थीहरु पनि गाउँ फर्किएका छन्।
सरकारले प्लस–टुसम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षाका रुपमा व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्लस–टुको शिक्षालाई बढी महत्व दिइन्छ। यस्तो अवस्थामा कक्षा १० को परीक्षा दिएको १/२ महिनाभित्रै किन त्यही तहको अर्को परीक्षा गर्नुपर्‍यो, त्यसको सान्दर्भिकता के ? भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। १० कक्षा पास गरेपछि सिधै १२ कक्षासम्म पढेर माध्यम तहको अन्तिम परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बहस नयाँ होइन। तर, आजको दिनसम्म लागू हुन सकेको छैन।
कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर यस वर्षको एसईई परीक्षा त स्थगित गरिएको छ। तर, यही परीक्षा फेरि लिइन्छ कि लिइँदैन ? यसबारे सरकारले केही बोलेको छैन। तर, सरोकारवालाहरुले एसईई परीक्षा रोकिएका विद्यार्थीहरुले अब सिधै कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्।श्राेत लाेकपाटी न्यूज